Waxbarasho sare | Samfunnskunnskap.no
Markay ardaydu dugsiga sare dhammeeyaan waxay sii wadan karaan waxbarasho sare oo ah jaamacad ama maxadada sare.
Jaamadaha iyo maxadada sare dawlada ayaa leh, waxbarashadooduna waa u lacag la’aan ardayda. Dawlada ayaa ka bixineysa. Lakiin waxa caadi ah in ardaydu bixiyaan lacag yar oo fii ah (semester- eller studieavgift). Waxa kale oo jira mac-hado sare oo gaar loo leeyahey. Kuwaas ardaydu waxay bixiyaan qaybtooda kharashka.
Kharashka ku baxa jaamacadaha iyo maxadada sare ee dawlada, waxbarashadu waa u bilaash dadweynaha. Laakiin kuwa dawlada iyo kuwa gaarka loo leeyahay labadaba waa in ardeydu iska bixiyaan qalabka ay adeegsanayaan. Taa waxa ka mid ah buugaagta wax laga barto iyo qalabka waxbarashada. Taas macnaheedu waxa weeye iney soo iibsadaan buugaagta iyo qalabka kale ee ay u baahan yihiin.
Inkasta oo ay jaamacadaha iyo maxadada sare bilaash yihiin, hadana waxa loo baahanyahey lacag lagu bixiyo kharashyada kale inta ardaygu waxbarashada wato. Markaa waa caadi in sanduuqa amaahda (Lånekassen) lacag laga amaahdo si qofku isaga bixiyo kirada guriga, cuntada iyo waxyaalaha kale ee lagama maarmaanka ah inta wax la waxbaranayo. Sidaa darteed haddii qofku rabo waxbarasho sare wuu ka maarmi karaa reerkooda dhaqaale ahaan. Sidoo kale arday badan ayaa shaqeysata iyagoo wax baranaya si ay u helaan lacag ku filan noloshooda.
Fursado waxbarasho oo loo simanyahey
Bulsho casri ah waxa lagama maarmaan u ah dad badan oo shaqeeya, tiknoolaji, wax-soo-saar iyo wax hindisid ama abuuris wax cusub. Sidaa darteed Norwey waxay u baahantahey dad aqoon sare leh. Sidaa awgeed dawladduna waxay ka caawisaa dadka oo dhan waxbarasho loo siman yahey.
Maanta dadka waaweyn ee Norwey ku nool boqolkiiba 30 waxay leeyihiin aqoon sare. Dadka dhallinyarada ah ayaa iyaguna badi qaata waxbarasho sare, heerka aqooneed ee Norwey marwalba wuu soo kordhayaa. Maanta in kabadan 60 % ardeydu waa dumar, markaa dumarka ayaa waxoogaa tacliintoodu ka sareysaa ta ragga.
Dhammaan dadka heysta shahaadada dugsiga sare, waxey codsan karaan jaamadaha iyo maxadada sare. Xafiiska guud ee ogglaanshaha jaamcadaha iyo maxadada sare ayaa bixiya boosaska jaamacadaha iyo maxadada sare Samordna opptak waxey maareysaa helitaanka jaamacadaha iyo macadyada sare ee la siman.
Sanduuqa amaahda (Lånekassen)
Sanduuqa amaahdu wuxu siiyaa deeq iyo amaah aradyada dugsiga sare iyo ardayda waxbarashada sare ee Norwey iyo ardayda noorwiijanka ee dibedda wax ku barta.
Sanduuqa amaahdu wuxu qayb ka qaataa
in la baabi’iyo kala duwanaanshaha oo la keeno sinaan si ay dhammaan dadku u heli kraan waxbarasho sare iyada oo aan ku xidhnayn deegaan, da’, jinsi iyo dhaqaale ama xaalad bulsho
in waxbarashada sare u socoto xaalad shaqo oo lagu qanacsan yahay si shaqada waxbarashadu ay u noqoto mid si fiican loo guto.
in lagu ilaaliyo bulshadu in ay heli karaan shaqaale xirfad aqooneed leh .
Dadka waaweyni in ay codsan karaan deeq iyo/ama amaah ay ku qaataan dugsi hoose/dhexe iyo waxbarasho dugsi sare.